तपाईंहरु यतिखेर ‘ओलीतन्त्र’ विरुद्ध संघर्षमा हुनुहन्छ । माइतीघर मण्डलामा बसेर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीको तपाईहरु सडकमा बसेको दृष्य हेर्न खुबै मज्जा आएको छ । ओलीको हुकुम छ तपाईंहरुलाई– अब त्यही बस्नुस्, जिन्दगीभरि बाँकी जिन्दगीभरि सडकमै बस्नुस् ।
तपाईहरु ‘सूर्य’ निर्वाचन चिन्ह हाम्रो हो भन्दै निर्वाचन आयोगमा गुहार गर्दै हुनुुहुन्छ । त्यहाँ ‘ओलीको सेटिङ’ पो छ कि भन्ने भय छ तपाईहरुको मनमा । यो हारगुहार र भयले प्रष्ट गर्दछ हामीले कस्ता संवैधानिक संस्थाहरु बनाएछौं । संवैधानिक संस्थाहरुको अविश्वासनीयतामा कहिँ न कहिँनेर तपाईहरुको पनि भूमिका छ । तथाकथित संवैधानिक परिषदको जुन व्यवस्था संविधानमा भयो, त्यो प्रकारान्तले राजनीतिक भागबण्डा हो । हामीले ‘संवैधानिक आयोग सेवा’ बनाउन सक्थ्यौं । त्यहीभित्रको वरिष्ठताबाट प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्तिको प्रक्रिया बनाउन सक्थ्यौं । हामीले त्यसो गरेनौं ।
लोकतन्त्रको सारतत्व यदि ‘बहुमत’ हो भने चुनाव चिन्ह तपाईहरुले पाउनुपर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, यति निर्णय गर्न पनि निर्वाचनलाई हम्मेहम्मे छ । मलाई शंका लाग्छ- निर्वाचन आयोगले तपाईहरुलाई सूर्य चिन्ह दिन्छ । यदि दिएछ भने ओली निक्कै कच्चा खेलाडी हुन्, हाम्रा संवैधानिक निकायको विश्वासनीयता र तटस्थता कायमै छ भनेर बुझौंला ।
अदालतमाथि हामी उत्तिकै शंका गर्दैछौं । तपाईहरुलाई सम्झना हुनुपर्दछ- प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियुक्ति समयका बहसहरु । कतै उनले भनेका थिए- मैले नेकपालाई निराश बनाउने छैन । त्यतिखेर नेकपा भन्दा तपाईहरुले आफूहरुको समेत चित्र देख्नु भो । आजको नौवत आउँछ भन्ने कल्पना नै गर्नु भएन ।
जसरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान पढ्दा सूर्य चिन्ह तपाईहरुको हो, त्यसरी नै संविधानको धारा ७६ का सबै उपधारा पढ्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने कुरामा हामी सबै ढुक्क हुनुपर्ने हो । तर, हामी ढुक्क छैनौं । यसको अर्थ अदालत पनि हामीले ठीक बनाएका छैनौं ।
ल कजेल छोडेको दिनदेखि अदालतको मुख नदेखेका, लाइसेन्स मात्र गोजीमा बोकर जीवनभरि पार्टीको झोला बोकेर हिंडेका कार्यकर्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको प्रावधानबाट अदालत छिराउने तपाईहरु पनि हो । न्यायधीशको सपथ खाएर बल्खु कार्यालयमा आशिर्वाद थाप्न जाने न्यायाधीशहरुको हुल पाउँदा त्यतिखेर तपाईंहरुलाई निक्कै ठूलो पराक्रम गरेजस्तो लागेको थियो होला ।
सूर्य चिन्ह पनि तपाईहरुकै भागमा परेछ, विघठित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित पनि भएछ भने मानौला यो देशमा अझै निष्पक्षता र न्याय मरेको छैन । तर, यो खेल त्यति सजिलो छ जस्तो लाग्दैन । कम्तीमा ओली त्यति कच्चा खेलाडी नहुनुपर्ने । रहेछन् भने हामीले सोचेभन्दा सरल तरिकाले उनको पतन होला । कुचोले बडार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लग्यो भनेर मख्ख परौंला । तर ओलीतन्त्र फितलो छ जस्तो लाग्दैन ।
किन त ? त्यसका केही प्रष्ट प्रमाण र कारणहरु छन् । राष्ट्रपति उम्मेद्वार छनौटको बेलामा उनले जुन जबरजस्ती गरे, त्यसले प्रष्ट हुन्छ कि आफ्ना मान्छे ठाउँठाउँमा सेटिङ गरिरहुनको महत्व कति छ ? त्यो कमरेड ओलीले राम्रो बुझेका रहेछन् । भर्खरै उनका अर्को विश्वास पात्र आम प्रचलन र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आख्तियारमा छिर्नु भएको छ । त्यो नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया मात्र हैन, तपाईहरुको घाँटीमाथि ‘डेमोकल्सको तरबार’ पनि हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा जुन प्रकारको निर्णय भयो, त्यतिखेर तपाईहरु बोल्नु भएन । कुनै अदृष्य भयले तपाईहरुलाई गाँजेको थियो । विष्णु पौडेल जग्गा फिर्ता गरेर उम्किए । त्यतिखेर उनी सायद उनी साझा महासचिव थिए । नीतिगत निर्णयमा यदि अख्तियार प्रवेश गर्न पाउँदै भने मौन बस्नु पर्ने हो, नीतिगत निर्णय भएको हुँदा फलाना, फलानालाई माफी गरियो भनेजस्तो निर्णय अख्तियारले गर्‍यो, तपाईंहरु सबै हेरेको, हेर्‍यौ हुनु भो ।
चाहे अदालतको कुरा होस् वा निर्वाचन आयोगको वा अख्तियारको एउटा साझा निष्कर्ष निस्कन्छ कि हामीले निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी संवैधानिक निकायहरु बनाएका छैनौं । यी प्रावधानसम्बन्धी संवैधानिक सुधारको खाँचो प्रष्ट छ, के तपाईहरु आगामी दिनको यो एजेण्डा बोक्न राजी हुनुहुन्छ ?
आज जुन ओलीतन्त्रले तपाईहरुलाई ‘सडक छाप’ बनाएको छ, त्यसको उदयको पृष्ठभूमिलाई पनि सम्झिन आवश्यक छ । ओलीतन्त्र ओलीतन्त्र हो कि हैन ? भन्ने बिषयमा नै तपाईहरुमा ठूलो अन्यौल थियो । सारा दुनियाँ चिच्याइरहेको थियो- जो ओलीतन्त्रकोे मारमा थियो, तर तपाईहरु चाहे पार्टी एकताका नाममा होस् वा आलोपालो प्रधानमन्त्री खाने सम्झौतामा होस्, चाहे राष्ट्रवादको मसान फुक्ने कार्यमा होस् वा अन्य धेरै कुराहरुमा तपाईहरु जानाजान ओलीतन्त्रको उदयका लागि काँध थापिरहनु भएको थियो ।
देशमा केही बाँकी मुद्दाहरु थिए, जो हिजो तपाईहरुले नै उठाउनुु भएको थियो- जब ओलीतन्त्र हावी हुँदै गयो, ती सवालहरु तपाईहरुले अलपत्र छोडिदिनु भयो ।
जस्तो- राज्यको पुनर्संरचना र सीमांकन सम्बन्धी तपाईहरुका धारणा ओलीतन्त्र सामु लल्याकलुलुक भए । माओवादी आन्दोलनमा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी सोच के थियो, कमरेड प्रचण्डलाई सम्झाई रहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । एमालेको आठौं महाधिवेशन (बुटबल महाधिवेशन) को राजनीतिक प्रतिवेदन सायद कमरेड झलनाथ खनालले लेख्नु भएको थियो । माधव नेपालले त्यो प्रतिवेदनप्रति कुनै असहमति राख्नु भएको थिएन, ओलीतन्त्रको छाया पर्दै गएपछि तपाईहरुले यी मुद्दा छोड्नु भयो, देशको एउटा पंक्ति र सीमान्तकृत समुदायले तपाईहरु धोकेबाज ठान्न थाले ।
यहाँसम्म की रेशम चौधरीको रिहाईको मुद्दा उठाउने आँट तथा नैतिक साहससम्म तपाईहरुसँग रहेन । माक्र्सवादी बल प्रयोगको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, झापा आन्दोलन र जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने तपाईहरु अत्यधिक मतले विजित एउटा निर्वाचित सांसद जेलभित्र सड्दा एक शब्द बोल्न नसक्ने बिन्दूमा पुग्नु भयो । तपाईहरुको नैतिक आधार त्यहाँनेर कति धेरै स्खलित भयो होला ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा फरकफरक निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लडेका एमाले र एमाओवादीको निर्वाचन घोषणापत्र एउटै थियो । त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा थियो । तपाईहरुले करिब दुई तिहाई पाउनु भयो । संविधान संशोधनका यस्ता अग्रगामी सावलमा तपाईहरुलाई दुइतिहाई पुर्याई दिन समर्थन दिन तयार दलहरु थिए, तर संविधानको अग्रगामी सुधारतिर तपाईहरुको फिटिक्कै ध्यान गएन ।
गत वैशाख ८ गते दल विभाजन सहज गर्ने जुन अध्यादेश आयो, तपाईहरु तर्सिनु भयो । तर, तत्कालिन समाजवादी दल विभाजित गर्न ओलीले जुन हर्कतहरु गरे, त्यसको विरुद्धमा बलियो गरी उभिनु भएन । ती सांसद अपहरणकारीहरु आज तपाईहरु कै विरुद्ध मनभरि बोलेर हिंड्दैछन, जो यतिखेर जेलमा हुनु पर्ने थियो । तिनीहरुमाथिको मुद्दा पुलिसले दर्ता नगर्दा विधिको शासन मरेको पीडा तपाईहरुको मनमा जागेन ।
संविधान जारी गर्दा बखत भएको मधेश आन्दोलनलाई ओली जसरी गाली गर्थे, तपाईहरु त्यसैमा ताली पिट्दै हुनुहुन्थ्यो । मधेश पनि देश नै हो, सकेसम्म त्यसलाई समेट्नु पर्छ भन्ने सामान्य लचकता समेत तपाईंहरुमा थिएन । बरु उल्टै ओलीलाई ‘महान राष्ट्रवादी’ को बिल्ला लगाई दिन आतुर हुनुहुन्थ्यो ।
देश र जनताका लागि गर्नु पर्ने धेरै ठूल्ठूला कामहरु बाँकी थिए । नीतिगत कुराहरु बाँकी थिए । तपाईहरु ससाना कुरामा अल्झिनु भयो । नेताहरुको मर्यादाक्रम, कुर्सीको साइज र स्थान, आफ्ना गुटकालाई मन्त्री बनाउने बार्गेनिङ, राजनीतिक नियुक्ति जस्ता बिषयमा तपाईको ध्यान गयो ।
दिनुपर्ने जोड– संविधान संशोधनका बाँकी मुद्दा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समाजवादको मोडालिटीमा थियो । कोरोना महाव्याधीको प्रतिरोध र आर्थिक स्टिमुलस प्याकेजमा थियो । तर, तपाईहरुको ध्यान त्यहाँ थिएन । त्यही भएर ओलीलाई लाग्यो कि तपाईहरुसँग नैतिक बल छैन । यतिका मान्छेहरुलाई ह्याकुलाले मिचिदिन्छु भन्ने भान उनलाई पर्‍यो । आजको दुर्भाग्यका लागि ओलीको सनक, महत्वाकांक्षा र अहंकार त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तपाईहरुको लोभ, अकर्मण्यता, स्वाथ र गलत रणनीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
ओलीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रष्ट दुईवटा आधार तपाईहरुसँग थिए । पहिलो- ओलीले प्रतिनिधिसभा विघठन गर्नु धेरैअघि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी बहुमतले यथोचित निर्णय गर्न सक्नु हुन्थ्यो । पार्टी संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुु हुन्थ्यो । पार्टी फुटाएको आरोप नलागोस भनेर गर्नुभएन । तर, आखिर ओलीलाई त त्यो डर, लोकजाज रहेनछ । तपाईंहरु जति डराउनु र लचिलो हुँदै जानु भो, ओलीले उत्तिनै पेल्दै गए । ओलीको योजना सफल भयो भने अरु पार्टीलाई त खासै फरक नपर्ला तर तपाईहरुलाई चाहिँ राम्ररी भित्ता लगाउने छन ।
उनको योजना विफल भयो भने आफैं पतन भएर जालान् । संसारमा सबै दुष्ट शासकहरुको उत्थान र पतनको आआफ्नै कथा छ । ओली र ओलीतन्त्रको पतन पनि अपरिहार्य छ । तर, पतन हुनुअघि उनले देश र जनतालाई अझ कति धेरै दुःख दिने हुन यसै भन्न सकिन्न । राष्ट्रिय जीवनको महत्वपूर्ण समय फेरि खेर जाँदैछ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीभित्र ओलीज्मको उदयका लागि वातावरण दिएको, कम्युनिष्ट पार्टीले गत निर्वाचनमा मतदातासामु गरेका बचन पुरा गर्न नसकेको, कम्युनिष्ट सिद्धान्तका आधारभूत प्रस्तावनाहरुलाई न्याय गर्न नसकेको, कम्युनिष्ट पाटीको सरकार नै अकारण प्रतिनिधिसभा विघटनको कारक बनेकोमा के तपाईहरु सार्वजनिक आत्मआलोचना गर्न राजी हुनुहुन्छ ?
यदि हुनुहुन्न भने मलाई लाग्छ- तपाईहरु अझै पनि गलत ठाउँ मै हुनुहुन्छ । आफू गलत ठाउँमा उभिएर सत्य, न्याय र लोकतन्त्रको लडाई लड्न सहज हुँदैन । जित्न सम्भव हुँदैन ।